विराटनगर महानगरकी ‘न्यायाधीश’ अर्थात् उपमेयर : सिरहाकी चेली, विराटगरकी बुहारी - Koshi Online
विराटनगर महानगरकी ‘न्यायाधीश’ अर्थात् उपमेयर : सिरहाकी चेली, विराटगरकी बुहारी
अन्तिम समयमा आएर विराटनगरमा उम्मेदवारी घोषणा गर्दै गर्दा त्यसबेला नेपाली कांग्रेसकी उपमेयरकी उम्मेदवार इन्दिरा कार्कीको उति चर्चा थिएन । उपमेयरका अन्य उम्मेदवारका बीचमा उनलाई ‘कमजोर र फिल्डमा नदेखिएकी’ उम्मेदवारका रूपमा धेरैले टिप्पणी गरे । कतिपयले उनलाई जित्ने त परकै कुरा, प्रतिस्पर्धाको सूचीमा समेत नपर्नेसम्मको जोखानासमेत हेरेका थिए ।
तर, इन्दिराले धेरैको त्यस्तो अड्कलबाजीलाई ‘हावा’ खुवाइदिइन् । र, मेयरको भन्दा बढी मतान्तरले महानगरको उपमेयर जितिन् । त्यसो त उनी स्वयं पनि चुनावताका सभाहरूमा ठाउँ–ठाउँमा भन्ने गर्थिन्, ‘मैले चुनाव जितिसकें, अब भोट हाल्न र मत गन्न मात्रै बाँकी हो ।’
नभन्दै इन्दिरा आफ्नो हिसाबमा पास भइन्, अरू फेल । महानगरका दुई ठूला दलका गठबन्धनलाई हराउँदै उनी शानदार जितका साथ महानगरको उपमेयर बनिन् । अर्थात्, उनी महानगरको ‘न्यायधीश’ बनिन् । उनले विराटनगरमा उपमेयर जित्ने सबैभन्दा बलियो उम्मेदवारका रूपमा चर्चा गरिएकी माओवादीकी नमिता न्यौपानेलाई ८ हजार ६ सय २२ मतको भारी अन्तरले हराउँदै महानगरको साँचो हात पारिन् ।
संविधानले स्थानीय तहका उपप्रमुखलाई न्यायिक समितिको नेतृत्व सुम्पिने व्यवस्था गरेको छ । न्यायिक समितिका अधिकार स्थानीय शासन सञ्चालन ऐन र नियमावलीले टुंग्याउने व्यवस्था छ । तत्काललाई नियमावली बनिनसकेको भए पनि अब साँध–सिमान, सन्धि सर्पन, आलीधुरा, बाँध–पैनी वा कुलो तथा पानीको बाँडफाँड, बाटो मिचेका मुद्दादेखि मुलुकी ऐनका प्रचलित व्यवस्थाका केही मुद्दासते स्थानीय तहमा उपप्रमुखले नै हेर्ने व्यवस्था छ । तसर्थ, अब इन्दिरा कार्की विराटनगर महानगरको सामाजिक ‘न्यायधीश’को भूमिकामा पनि रहने छिन् ।
यस्तो छ इन्दिराको राजनीतिक उकाली–ओराली
५५ वर्षीया इन्दिरा कार्की सप्तरीको धनकलकी चेली हुन्, विराटनगर कर्मथलो । ०३९ सालमा १९ वर्षको उमेरमा शालीक कार्कीसँग बिहे गरेपछि उनी विराटनगरकी बुहारी भइन् । विद्यार्थी जीवनकालदेखि नै थोरबहुत राजनीति थालेकी इन्दिरालो स्नातक तहसम्म पढेकी छिन्, परीक्षा पास गर्न भने सकिनन् ।
त्यसताका विद्यार्थी राजनीतिमा लाग्दा सुरुआती दिनमा ‘छोरी मान्छे राजनीतिमा लाग्नु ठीक हुँदैन’ भनेर परिवारले उनलाई ब्रेक लगाउन खोजे पनि उनी रोकिइनन् । उनी अघि बढिन् । र, आज उनी महानगरको उपमेयरको कुर्सीमा बस्दैछिन् ।
कांग्रेस पृष्ठभूमिको परिवार भएकाले आफू पनि पहिल्यैबाट कांग्रेस राजनीति देखेको र सुनेकाले त्यसतर्फ आफू मोहित भएको इन्दिरा बताउँछिन् । त्यसमा पनि उनका बुबा त कांग्रेसका नेतै परेछन । त्यसकारण पनि उनलाई राजनीतिप्रति आकर्षण बढ्यो । तब क्याम्पस पढ्न थालेसँग उनी नेविसंघको साधारण सदस्य बनेर कांग्रेस राजनीतिमा लागिन् ।
नेविसंघ, कांग्रेसको वडाको साधारण सदस्य, वडा सभापति, जिल्ला सहसचिव हुँदै पछिल्लोपटक महासमिति सदस्य रहेकी इन्दिरा आफू लामो समयदेखि अविचलित हुँदै आएको र निष्ठाको राजनीति गरेकै कारण आज यो ठाउँसम्म आइपुगेको बताउँछिन् । ‘राजनीतिमा लागेको ३५ वर्ष भयो, बीचमा मैले पनि थुप्रै आरोह–अवरोह छिचोलें,’ इन्दिरा भन्छिन्, ‘परिवारको साथ र हौसलाले नै राजनीतिक यात्राले निरन्तरता पायो ।’
एकताका नेपाली कांग्रेस विभाजन हुँदा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कांग्रेस प्रजातान्त्रिकतिर लागिन्, इन्दिरा । अहिले पनि ‘देउवा लाइन’की भनेर चिनिने उनी पछि पार्टी एकता भएसँगै पुन कांग्रेसमै आइन् । विराटनगरको मेयरमा हालका प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापतिसमेत रहेका देउवा निकटले टिकट नपाएपछि कार्कीलाई विकल्पका रूपमा अघि सारिएको हो । एकप्रकारले भन्दा उनलाई गुटको हिसाब मिलाउँदा उपमेयरको ‘चिठ्ठा’ हात लाग्यो ।
सहकारी विकास बोर्डमा आबद्ध इन्दिरा अहिले विराटनगरको पुरानो सामाजिक संस्था एलिट क्लबअन्तर्गत सांस्कृतिक सदस्य छिन् । यसैबाट उनी सामाजिक गतविधिमा सक्रिय हुन्छिन् । ‘म राजनीतिमा मात्रै छैन,’ इन्दिराले चुनाव जितेपछि उत्साहित हुँदै भनिन्, ‘म समाजको सिपाही एक पनि हूँ, म अहोरात्र सामाजिक कार्यमा खट्दै आइरहेकी छु ।’
यसअघि जनप्रतिनिधिका रूपमा कुनै चुनाव नलडेकी इन्दिराले यसअघिका दुई महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यका लागि चुनाव लडिन् । तर, उनको दुर्भाग्य– दुवैपटक लज्जास्पद हार व्यहोरिन् । धन्न ! उनको दोस्रो चुनावी इनिङमा त्यही पराजयको कथा दोहोरिएन । पहिलोपटक जनप्रतिनिधका रूपमा मैदान उत्रिएकी उनलाई विराटनगरका मतदाताले भोट दिए । र, शानदार जित दिलाए । ‘यो मेरो मात्रै जित हैन,’ इन्दिरा भन्छिन्, ‘ यो सबै महिलाको जित हो, जसले मलाई विश्वास गरे ।’
हामीकहाँ अक्सर महिलालाई घरबाहिर निस्केर काम गर्न मुस्किल पर्छ । अझ राजनीति गर्न त झनै गाह्रो । तर, इन्दिराले भने पहिल्यैबाट त्यो छुट पाइछन् । माइतीमा बुबा पनि कांग्रेका नेता भएकाले उनलाई रोकटोक भएन । बिहेपछि श्रीमान्को घर आएपछि पनि परिवार कांग्रेस पृष्ठभूमिकै पर्यो, उनलाई राहत मिलिहाल्यो । तब बुहारी भएर उनले चुलोचौकामै सीमित हुनु परेन । राजनीति गर्ने नाममा उनले घरपरिवारसँग विद्रोह गर्नुपरेन । ‘राजनीतिको मामिलामा त म आफूलाई लक्की नै ठान्छु,’ इन्दिरा सुनाउँछिन् ।
इन्दिरा आज आफू यो ठाउँसम्म आइपुग्नुको देन बुबाआमा तथा श्रीमान्लाई दिन्छिन् । ‘सबै छोरीले त्यो बेलामा कहाँ राजनीति गर्न पाउँथे ! अझ बुहारी भएर अर्काको घर पुगेपछि त कुरै अर्कै हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘धन्न ! मैले घरतर्फबाट पनि राजनीति गर्न छुट पाएँ, परिवारको साथ पाएँ ।’
सहज राजनीतिक यात्राबाटै आज महानगरको उपमेयर बनेकी इन्दिराको उति संघर्षपूर्ण कथा भने छैन । ०६२÷०६३ को जनआन्दोलनताका दुईपटक पुलिस–प्रशासनको धरपकडमा पर्नु र दुई दिन हिरासतमा बस्नुबाहेक उनका खास राजनीतिक उत्तारचढाव छैनन् । पार्टी राजनीतिकै कुरा गर्दा पनि नेतृत्वमा ‘प्रभाव नराखेकी’ उनलाई धेरैले कोटाबाट टिकट पाएर जितेकी भन्छन् । जे होस्, टिकट जसरी पाए पनि इन्दिराले शानदार जित निकालिन् । र, ऐतिहासिक सहरको उपमेयर बनिन् ।
यस्ता छन् प्रतिबद्धता :
–विराटनगरलाई सुन्दर, शान्त र हराभरा बनाउने ।
– नमूना विराटनगर बनाउने ।
–महिला हिंसा न्यूनीकरण गर्ने ।
–नगरका बेरोजगार महिलाका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउने ।
–बिजुली, खानेपानी, बत्तीको सहज व्यवस्था गर्ने आदि ।